तपाईं एक निर्माता वा व्यापार कम्पनी हो?
हामी एक निर्माता हो र हाम्रो व्यापारिक अपार्टमेन्ट को मालिक हो। हाम्रो मूल्य थप प्रतिस्पर्धी राख्न प्रत्यक्ष कच्चा माल स्रोतहरू स्वामित्व।
तपाईंको कारखानाले गुणस्तर नियन्त्रणको लागि कसरी गर्छ?
गुणस्तर हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी पूर्व-उत्पादन पुष्टिकरण गर्छौं जस्तै कपडा, सामान र आकार र मुद्रण र कढ़ाईको ढाँचाहरू जाँच गर्नुहोस्, अनुमोदनको लागि पठाइएका पूर्व-उत्पादन भौतिक नमूनाहरू। उत्पादन गर्नु अघि, हाम्रो QA ले यस अर्डरका केही मुख्य बुँदाहरूमा ध्यान दिन कारखाना वा कार्यशालालाई निर्देशन दिनेछ। त्यसोभए हामी १ लाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि बल्क प्रोडक्शन अन-लाइन निरीक्षण गर्नेछौंST थोक उत्पादन उत्पादन योग्य छ; अन्तमा, जब थोक उत्पादन समाप्त हुन्छ, हामी औपचारिक निरीक्षण रिपोर्ट गर्न हाम्रो भित्री भाग QC निरीक्षण गर्नेछौं र यदि आवश्यक छ भने, हामी ढुवानी अघि अन्तिम पुष्टिकरणको लागि तपाईलाई बल्क उत्पादन नमूनाहरू पठाउन सक्छौं।
के म एउटा नमूना प्राप्त गर्न सक्छु? के मैले यसको लागि तिर्नुपर्छ?
मोजा बारे: यदि हामीसँग कपडा वा समान नमूनाहरू उपलब्ध छन् भने, हामी नि: शुल्क नमूना पठाउन सक्छौं। यदि तपाइँसँग विकास गर्न नयाँ ढाँचा छ भने, हामी केवल नमूना नक्कलीको लागत सङ्कलन गर्छौं। र ढुवानी लागत तपाईंको खर्चमा छ। नमूना लागत थोक उत्पादनबाट फिर्ता गरिनेछ।
पजामा को बारेमा: खाता तपाईको नमूनामा निर्भर हुन्छ, सामान्यतया यो २०-५० USD हुन्छ, तर यदि त्यहाँ धेरै कढाई वा मुद्रणहरू छन्, र यो धेरै जटिल छ भने, नमूना शुल्क बढी हुनेछ। नमूना समय विभिन्न नमूनाहरू अनुसार 5-7 दिन हो। यदि तपाइँ तुरुन्तै नमूना चाहनुहुन्छ भने, यो 1-2 दिन भित्र गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँसँग अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस खाता छ भने, तपाइँ भाडा संकलन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन भने, तपाईंले नमूना शुल्कको साथ भाडा तिर्न सक्नुहुन्छ।
औसत डेलिभरी समय के हो?
मोजा बारे: नमूनाको लागि 2-7 दिन र ठूलो उत्पादनको लागि 10-30 दिन; 1,000 pcs देखि 10,000 pcs सम्म मिलाइएको मात्रा लगभग छ10 दिनहरू। यदि 10,000pcs भन्दा बढी, यो सम्भवतः हुनेछ१५-३० दिनहरू।
तपाईं अनुकूलित डिजाइन र प्याकेज गर्न सक्नुहुन्छ?
OEM र ODM स्वागत छ। त्यो हाम्रो नारा हो: तपाईं डिजाइन,BFL सिर्जना गर्दछ। तपाईं हामीलाई सामग्री, आकार, रंग वा लोगो बताउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो डिजाइनरले तपाईंलाई केही समायोजन गर्न मस्यौदा पठाउनेछ। र अन्तमा तपाईंको डिजाइनमा आधारित नमूना बनाउनुहोस्।
उत्पादनको समयमा उत्पादन कसरी निरीक्षण गर्ने?
हामीसँग कच्चा माल र समाप्त निरीक्षण पछ्याउन QC विभाग छ। प्रयोगशालामा विशेष निरीक्षण उपकरण गर्नकेही आवश्यक परीक्षणहरू जस्तै ग्राम वजन, आकार, र कपडा संकुचन; आवश्यक भएमा कुनै पनि तेस्रो पक्ष निरीक्षण वास्तवमै स्वागत छ।
भुक्तानी सर्तहरू के हो?
तपाईं TT, Paypal, L/C आदि मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको MOQ के हो?
मोजा बारे: हामी ओ प्रदान गर्दछौंne-piece डेलिभरी, स्टक अप गर्न आवश्यक छैन, आफ्नो सूची दबाव समाधान। यदि तपाईलाई आफ्नै डिजाइन चाहिन्छ भने, हामी स्वीकार गर्न सक्छौं 5000 pcs/शैली। तर यदि QTY सकियो भने50000 pcs, मूल्य धेरै प्रतिस्पर्धी हुनेछ।
पजामा बारे: हामी दुई प्रदान गर्दछौं- टुक्रा वितरण, स्टक अप गर्न आवश्यक छैन, आफ्नो सूची दबाव समाधान। यदि तपाईलाई आफ्नै डिजाइन चाहिन्छ भने, हामी स्वीकार गर्न सक्छौं 200 pcs/शैली/रङ। तर यदि QTY सकियो भने50000 pcs, मूल्य धेरै प्रतिस्पर्धी हुनेछ।
तपाईंको व्यापार सर्तहरू के हो?
हामी EXW, FOB, CIF, DDP गर्न सक्छौं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका मा, हाम्रो DDP मूल्य तपाईं को लागी धेरै अनुकूल छ।
के तपाइँ गुणस्तर निरीक्षण स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हो हामी तेस्रो पक्ष निरीक्षण स्वीकार गर्न सक्छौं।
मोजा शैलीहरू, खुट्टा मोजा,